Mampiseho ireo fomba fiasa farany amin'ny Virtualization marina sy alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny rakotra fampitaovana mivantana amin'ny IP IP amin'ny IBC2019 - NAB Show News nataon'i Broadcast Beat, Broadcaster ofisialy an'ny NAB Show - NAB Show LIVE
Home » News » Mampiseho ireo fomba vaovao farany i Aperi amin'ny fahamaotinana marina sy ny fampiasa amin'ny Live IP Media Workflows mivantana amin'ny IBC2019
Mampiseho ireo fomba vaovao farany i Aperi amin'ny fahamaotinana marina sy ny fampiasa amin'ny Live IP Media Workflows mivantana amin'ny IBC2019
Camarillo, CA, Septambra 9, 2019 - Taorian'ny vao nahazo vola famatsiam-bola mihoatra ny $ 10 tapitrisa (USD) dia ny talen'ny famokarana haino aman-jery virtoaly mivantana Aperi dia hampiseho ireo fanavaozana farany apetraky ny haino aman-jery IP voafaritra farany amin'ny IBC 2019 (mitsangana 2.C30). Anisan'izany ny vahaolana samihafa amin'ny haino aman-jery IP Virtualized IP Media Edge izay tarihin'ny fiantsenany V-stack® Software Hypervisor ho an'ny fiasan'ny haino aman-jery farany ambany sy ny fampitaovana vaovao mandeha amin'ny haino aman-jery mivantana Aperi App Store.
Aperi dia haneho fampisehoana mivantana sy misy eran-tany izay maneho ny tombony azo avy amin'ny alàlan'ny fantsom-baovao amin'ny alàlan'ny media mivantana. Ny mpitsidika dia afaka mahita fampisehoana mivantana manasongadina ny fanaraha-maso ny fizotry ny IP vaovao, manaitra sy fitrandrahana, miaraka amina andrana feno fiarovana sy fiarovana ara-piarovana - hevi-dehibe ho an'ny Aperi amin'ny fampisehoana. I Aperi koa dia hanana amboaram-peo mampandefitra feno amin'ny fampisehoana, ao anatin'izany ny 4K TICO, JPEG 2000 ary H.264.
"Na any amin'ny toerana fanatanjahantena, ao anaty vatan'ny OB ho an'ny hetsika ara-panatanjahantena mivantana na fanomezana vahaolana famokarana lavitra amin'ny alàlan'ny fitaterana avo lenta ny serivisy haino aman-jery avo lenta manerana ny tambajotra, i Aperi dia manolotra sehatra azo ampiharina indrindra eo amin'ny sehatry ny indostria," hoy ny Tale Jeneralin'ny Aperio Joop Janssen. "Amin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana mihetsiketsika, dia manome alalana ny mpamatsy serivisy hanisy marika sy hamerenany indray ny loharanon-javatra takiana, saika eo no ho eo ary ny saran'ny vahaolana nentim-paharazana."
Amin'ny IBC2019, i Aperi koa dia hanangana DVB-ASI na SDI amin'ny endriny mihetsika amin'ny alàlan'ny fomba fiasa mifototra amin'ny fenitra mifototra amin'ny ST 2022-2 ary ST 2022-6. mamela ny votoaty hilalao mivantana amin'ny alàlan'ny workflows IP.
Aseho ihany koa i Aperi hanehoana ny Network Address Translation (NAT) sy ny fitaterana afo (na ny fanaovana polike) SMPTE 2022 and SMPTE 2110 IP mikarakara ny orkestra mpitari-tolona sy mpamatsy NMS mampiasa API misokatra, mahery ary intuitive ny RABOTANA MAIMAINA.
Miaraka amin'i Aperi, ny mpamatsy serivisy, ny tompona zon'ny mpamorona ny zon'ny mpamorona sy ny mpampita vaovao dia afaka mampifanaraka haingana amin'ny fanovana ny toe-tsena ary miasa haingana kokoa, mahomby kokoa ary amin'ny salan'isa farany ho an'ny famokarana lavitra indrindra sy lafo indrindra. Ny fampifangaroana virtoaly tena Aperi sy ny fomba fiasa mifototra hypervisor-miorina V-Stack tsy manam-paharoa dia manome ny fizotran'ny haino aman-jery ambany ho an'ny tambajotra media afovoany sy ifotony.
Ireo mpanatrika IBC dia afaka mahita ny ekolojia IP miorina amin'ny rindrambaiko Aperi sy ny seho amin'ny haino aman-jery mivantana amin'ny endriny 2.C30.
Momba an'i Aperi
Ny teknolojia misokatra sy haitao voafaritry ny rindrambaiko Aperi dia manazava ny fanatanjahantena mivantana, fialamboly ary famokarana vaovao amin'ny sehatra lehibe indrindra eran'izao tontolo izao.
Miaraka amin'ny sehatra media IP-centric sy FPGA mifototra amin'ny FPGA, ny mpanome tolotra, tompona votoaty, tompona zo ary mpampita izany dia afaka mamoaka votoaty avo lenta haingana kokoa, miaraka amin'ny haavo ambany indrindra sy ho an'ny famokarana lavitra faran'izay lafo sy lafo indrindra.
Raha te hahalala bebe kokoa momba an'i Aperi dia tsidiho azafady www.apericorp.com ka hanaraka @apericorp ao amin'ny Twitter.
fampitana injeniera fampitana Engineering CES2017 Graham Chapman navoaka ho an'nyEditor SoftAtHome, MStar, CES2017 Spears & Arrows fanadihadiana, Digital Nirvana, fanarahamaso ny media, IBC TVU Networks Video injeniera	2019-09-10
Previous: Core Post dia manolotra ny Sky One's Brassic ao HDR miaraka amin'ny DaVinci Resolve
Next: Ny rafitra lahatsary TAG dia manorina amin'ny sehatry ny fananganana onjam-bidy eo amin'ny tsena, fanaraha-maso ary Multiviewer Platform amin'ny alàlan'ny fanohanana ny fangatahana fampiasa bebe kokoa ary manolotra seha-joroana nokendrena